သက်ဝေ: ကုန်ဆုံးသွားသော နေ့ရက်များအကြောင်း
Posted by သက်ဝေ at 4:15 PM
rose of sharon November 9, 2009 at 6:07 PM
P.Ti November 9, 2009 at 6:46 PM
သနားအောင် ရေးတတ်တယ်တာ သိနေတော့ အမှန်တွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်း သိနေပါတယ်။ ကြင်နာပါတယ် အမရယ်... ညမအိပ်ပဲ နားနားပြီးရှင်းပေါ့နော်။
အိပ်နေမယ်.. အဟိ :P
Welcome November 9, 2009 at 7:09 PM
လွမ်းပေးဖော်ရှိနေတာသိရင် ကျေနပ်နေမှာ အမှန်ပါ။
အိမ် မရှင်းထားလဲ ခွင့်လွှတ်ပေးမယ်ထင်ပါတယ်။
ချစ်ကြည်အေး November 9, 2009 at 9:27 PM
ဟားဟားဟား, သနားစရာလေးကွယ် အဲလိုပြောချင်တာ အကြာင်းသိနေတော့လဲ ခက်သကွယ်:D
Hmoo November 9, 2009 at 9:30 PM
Miss Him...wanna2see.....Gift :)
Rita November 9, 2009 at 10:08 PM
အ ဟက် ဟက် ဟက် လို့
SDL November 9, 2009 at 10:33 PM
ကိုရီးယားကားက ဂျူမုံကားကြည့်မလား မသက်ဝေ
99 တွဲ ရှိတယ်။ ယူမယ်ဆိုရင် အနီးဆုံး MRT မှတ်တိုင်ထိ လာပေးမယ်
ပုံ / အဆူခံရတာကို မြင်ချင်နေသူ ပြည်သူတစ်ဦး
mae November 9, 2009 at 11:35 PM
ဒီလိုမှန်းသိ အိမ်လာပီး ဟင်းချက်ကျွေးခိုင်းပါတယ် ဟိ
Ko Boyz November 9, 2009 at 11:36 PM
သူဖတ်များ ဖတ်နေပြီလားဟု မချင့်မရဲတွေး..
သူ့ဆီ ဒီပို့စ် မရောက်ရောက်အောင် ဓါတ်ချောစာ ပို့လိုက်ရမည်လားဟု ကိုယ်တွင်း စေတန်က remind လုပ်...။
ခင်မင်းဇော် November 10, 2009 at 12:07 AM
အို သူ့ကို မလွမ်းရအောင် စိတ်ကို တင်းထားနိုင်အောင် မကောင်းတာတွေမှန်းသိရက်နဲ့ ကြံဖန်နေရတာ သူသိတန်ကောင်းပါရဲ့ သက်ဝေရယ်။
pandora November 10, 2009 at 12:31 AM
တကယ်ဆို သူမရှိတုန်း နန်းကြီးသုတ်တို့ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲတို့ လုပ်ပြီး အပေါင်းအသင်းတွေကို တနေ့လုံး အိမ်ခေါ်ကျွေးသင့်တာ....
Moe Cho Thinn November 10, 2009 at 12:37 AM
မဂျူးရဲ့ စောင့်ဆိုင်းခြင်းရဲ့ နိယာမ ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးတောင် သတိရသွားတယ်။
အိမ်ရှင်းသာရှင်း မမရေ။ ကြောင်မရှိတုန်း ကြွက်သောင်းကျန်းထားတာလေးတွေ.. :)
(ဒါနဲ့ ကိုကြီးက ရန်ကုန် ပြန်တာလား မမ)
khin oo may November 10, 2009 at 1:16 AM
မီယာ November 10, 2009 at 2:34 AM
မသက်ဝေ ရေးတာ ဖတ်ပြီး မမ KOM ကို မြင်ယောင်နေတာ.. ကော်မန့်တွေ ဖတ်တော့ သူရေးတာတွေ့ပြီး ပြုံးမိတယ်။ အမတယောက်ထဲ မဟုတ်ပါ... အဲ့သလိုတခါတလေ လုပ်ရတာ အပြစ်ရှိတယ်လို့ ခံစားရပေမယ့် ကျေနပ်စရာလည်း ကောင်းသား
ဆင်ဆင်ရေ.. ကျုပ်ကို အဲဒီ၉၉ခွေစာတိုက်ကပို့ပေးပါလား။
momiji November 10, 2009 at 9:40 AM
har har...u r so longer than me, for me.. only one day.
start 7pm to till morning 12 pm.
that's why i m afraid to watch Korea movie.
ပုံရိပ် November 10, 2009 at 10:27 AM
အစ်မက တယ်ဆိုးတာပဲ။ :D (ပုံရိပ်က အစ်မထက်ဆိုးသေး။ အားမငယ်နဲ့။)
Thant November 10, 2009 at 11:40 AM
ဆင်ခြေ ၊ ဆင်လက်တွေ ရောင်းရန်ရှိသည်..။
nu-san November 10, 2009 at 1:37 PM
မမသက်ဝေရေ.. ကိုရီးယားကား စွဲတာတော့ယုံတယ်... ကျနော့်တုန်းကတော့ ၁၆ ပိုင်းကို ၄ ရက် ကြည့်ယူရတယ်.... တပိုင်းပြီး တပိုင်း ဆက်ဆက်ကြည့်ချင်နေတာဆိုတော့ ဒီတပိုင်းပြီး အိပ်ပါမယ်လေ လုပ်ရင်းက မိုးလင်းတယ်... :D
အမရေ.. ကော်ဖီတွေ အဲလောက် သောက်လား... မအိပ်ချင်အောင် သောက်တာလားဟင်.. ကျနော်တော့ ၂ ခွက်လောက် သောက်မိရင် အိပ်မရတော့ဘူး..:)
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမ စိတ်ကြိုက်နေလိုက် ရတာလည်း လွတ်လပ်ခြင်းတစ်မျိုးပဲပေါ့နော်.. အခုလောက်ဆို အိမ်ရှင်းပြီးသွားလောက်ရောပေါ့.. :D
tg.nwai November 11, 2009 at 5:18 AM
ဟားဟား...ဟုတ်ပ သူငယ်ချင်းရေ...ဇိမ်ပဲကွာ..အားကျလိုက်တာ. တကယ်တမ်းကျတော့ သူ့ကို လွမ်းလို့ စိတ်ပြေလက်ပျောက်ပေါ့...ဟဲဟဲ..ကိုးရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေ အခွေကြည့်ရတာ မသက်သာဘူး သက်ဝေရေ.. တော်တော်အိပ်ရေးပျက်တာ..ကိုယ်တို့ကတော့ အဆူမခံရအောင် မီးပူစင်လေး ရှေ့ချပြီး...ဟိဟိ
T T Sweet November 11, 2009 at 8:43 AM
အရာအားလုံးကို မယုံနဲ့ဆိုပေမဲ့ .. အားလုံးကို ယုံသွားပါတယ်။
ကိုးရီးယားမင်းသားဘယ်သူလဲ။ ဘေးယုံကျင်းလား ... ဂျမ်းဒေါင်ဂွမ်းလား ... မရှင်းသွားသေးဘူး။ သူသိပ်ဆိုးတယ် ...
Brand April 24, 2010 at 11:40 PM
same as me, now readying your blog for2hours with unpaid bills, coffee and everything exactly, at 2pm, and the professional exam is in next week